Sida loo soo dejisan / record Spotify music iyo Dhagayso iPod / iPod Nano / iPod Shu
Sida loo Download-Record Music Spotify Dhagayso iPod-iPod Nano-iPod isku shaandheyn ku offline
Ma aha qof kasta isticmaala iPhone ama iPad ama aalad Android. Dadka qaar waxay isticmaalaan iPod Apple ah oo loo habeeyey music inta badan. Sida qalab kale, waxa ay sidoo kale taageertaa adeeg geeyo music Spotify iyo app Spotify waxaa lagala soo bixi karaa iyadoo la isticmaalayo habka la mid ah loo isticmaalo ee soo degsado barnaamijyadooda kale macruufka.
Si fudud u tagaan oo ay u App Apple Store aad iPod iyo soo bixi Spotify app music inay ku raaxaystaan ​​adeeg geeyo music . Waxaa kale oo ay leedahay Idaacada Spotify ah waxa ku jira. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u doortaan ka xidhid free ama lacag leh. Premium Times waxa uu leeyahay muuqaalada ka badan Times ee lacag la'aan ah. Wixii lacag bil kasta oo ah $ 9.99 oo keliya aad ku raaxaysan karaan music ka iPod la qaababka aan xad lahayn.
Laga soo bilaabo Spotify / Streaming Part1.Download-Record Music inay Lugood
Part2. Sida loo hagaagsan music aad iPod / iPod Nano / iPod shaandheyn
Part3. Bedelka music Spotify in iPod / iPod Nano
1.Download-Record Music From Spotify / Streaming in Lugood
Talaabada 1: TunesGo Open
Talaabada 2: Dooro Record:
Talaabada 3: ciyaari music / hoorto on Spotify
Talaabada 4: Guji "Rec"
Talaabada 5: Raadi songs ee "la diiwaangeliyey"
2.How si hagaagsan music aad iPod / iPod Nano / iPod shaandheyn
Fur Lugood aad pc ama Mac.
Connect aad iPod la your computer.
Riix calaamad yar oo qalab aad ku geeska gacanta midig oo Lugood.
Riix music dhinaca bidixda ka Lugood. Fiiri sawirka hoos ku qoran.
Sax checkbox nidaameed Music. Waxaad dooran kartaa music aad rabto in aad u hagaagsan hadii aadan rabin in ay u hagaagsan maktabadda oo dhan doorataa "xulay playlists, fannaaniin, albums iyo qaybaha" iyo doorashada la rabay playlists ama farshaxan ama albums ama qaybaha.
Tag hoose ee aad Lugood iyo guji nidaameed si hagaagsan maktabadda oo dhan ama music loo doortay in ay aad iPod ama iPod Nano ama iPod shaandheyn.
3.Transfer Spotify music in iPod / iPod Nano la TunesGo
Talaabada 1: From Spotify / hoorto in Lugood
First of dhan aad u baahan tahay si ay u qoraan heeso ka Spotify maktabadda Lugood aad iyo tani waxa ay tilmaamaysaa in waxow From Spotify / hoorto in Lugood
Talaabada 2: ka heli songs ee "la diiwaangeliyey"
Hadda songs la huleeshay ka Spotify in Lugood noqon doonaa muuqda ka yar "diiwaangeliyey" liiska ee dhanka bidix ee menu. (Screenshot muujinaysaa laba diiwaan songs-Track1 iyo Track3)
Talaabada 3: xirmaan iPhone / iPad / iPod
Hadda xiriiriyaan qalab macruufka ah (iPhone / iPad / iPod) si aad rabto in lagu wareejiyo track music ah. Mid ka mid ah dhammaadka cable ku xiran tahay in qalab macruufka ah, halka dhamaadka kale dekedda USB ah PC ah. On guul la xidhiidha, qalab muuqan doonaa qaybta "Device" ee TunesGo guryaha page dhinaca bidix ee menu. (Screenshot muujinaysaa Yuki ee iPhone sida qalab ku xiran)
Talaabada 4: midig u guji "diiwaangeliyey"
Hadda dhanka bidix menu, u tag ikhtiyaarka ah "diiwaangeliyey" maktabadda Lugood kaas oo furi doonaa dhibic hoos menu. Laga soo bilaabo tan menu doorto ikhtiyaarka ah "Dhoofinta Si aad" ka dibna qalab bartilmaameed si aad rabto in lagu wareejiyo gabayadii duubay. (Shaashada muujinaysaa Yuki ee iPhone sida qalab bartilmaameed). Heeso ayaa hadda ka heli wareejiyo.
Waxaad ka eegi kartaa heesaha oo gujinaya "Music" ikhtiyaarka hoos qalab dhinaca bidix ee menu.
Qaar ka mid ah muuqaalada ka badan TunesGo Wondershare:
Music beddelashada uun helay wax badan ka sahlan oo dhakhso leh TunesGo Wondershare. Users wareejin karaan music dhexeeya telefoonada iyo telefoonka oo waxay la saaxiibeen ee ah in ay tahay in ay Android iPhone ama iPhone si iPhone ama Android inay Android. Tallaabada A fudud by nidaamka talaabo si ay u gudbiyaan music hoos ayaa lagu muujiyey.
1. Waxaad ka qalab aad wareejin karaan music maktabadda Lugood aad oo aan laga badinin kasta oo muusiko ah. Kuwaas oo ah xayiraad laga heli karaa macruufka ah, Wondershare TunesGo kuu ogolaanaysaa inaad music ka qalab aad wareejiyo maktabadda Lugood aad. Habkaani ma aha wax caadi ah meel iyo in uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha uu ka samaysan yahay Wondershare TunesGo software gaar ah.
2. Users isticmaali kartaa Lugood leh Android. Haa, Lugood leh android. TunesGo Wondershare wuxuu u jejebiyaa ooday iyo kuu ogolaanaysaa inaad isticmaasho qalabka android aad la Lugood.
3. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si aad u nadiifiso maktabadda music aad. Waxaad u abaabuli kartaa maktabadda music aad adigoo isticmaalaya TunesGo in ay tirtirto files nuqul, kuwan raadkaygay aheyn ama ka maqan, iwm Waxaa kale oo tags music iyo cover album in aad music oo albums ku darayaa.
4. Download ka YouTube, Spotify Sound Cloud, iyo kuwo liita music kale goobaha adeegyada / video. Waxaad kala soo bixi kartaa videos ka YouTube, vimeo, iwm gudaha ka TunesGo. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa music ka Sound Cloud iyo goobaha music online kale xaq gudaha TunesGo.
5. soo bixi kartaa videos ka YouTube, vimeo, iwm gudaha ka TunesGo. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa music ka Sound Cloud iyo goobaha music online kale xaq gudaha TunesGo. marnaba Waxaad wax laga walwalo qaab music gaar ah oo ku saabsan qalab aad aan u ciyaaro sababtoo ah software TunesGo ee kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo music kasta oo si qaab ah in ay ka shaqeeyaan doonaa qalab.
6. Dib ugu maktabadda music adiga oo aan ka kaaftoomi kasta. Waxa kale oo aad heli karaan ilaa iyo dib soo celin maktabadda music aad markasta oo aad rabto.
> Resource > Music > Sida loo Download-Record Music Spotify Dhagayso iPod-iPod Nano-iPod isku shaandheyn ku O